Silvia Romano oo aayado quraan ah ugu jawaabtay dadkii u hanjabay
ROMA, Italy - Hadal-heynta warbaahinta dalka Talyaaniga waxaa qabsaday sheeko ku saabsan Silvia Romano oo boggeeda Facebook-ga kusoo qortay aayado quraan ah oo ay ku fasirtay luuqaddeeda.
"Hadalkeeda macnihiisa anigu waxaan u fasirtay in maadaama dadka xagjiriinta lagu tilmaamo ee loo aaminsan yahay inay yihiin dad xun ay iyadu leedahay dadkaas aad cadowgaaga u aragtid ee aniga xorriyaddeyda iga qaaday waxaa dhici karta inay saaxiibbadaada dhow noqdaan, laakiin samir bay u baahan tahay. Marka waxaad meeshaas ka dhuuxeysaa in iyada iyo nimankii heystay oo ay u afduubneyd ka gudbeen xadkii qof la heysto iyo qof wax heysta," ayey tiri Shukri.
Guddiga bulshada muslimiinta ah ee magaalada Milan ayaa soo dhaweyn u sameeyay Caa'isha, waxayna ballan qaadeen inay difaaci doonaan rabitaankeeda.
Bartamihii bishan, Xildhibaan ka tirsan garabka midig ee dalka Talyaaniga ayaa canaan weyn la kulmay kaddib markii uu "Argagixiso cusub" ku tilmaamay Silvia.
Pagano wuxuu sheegay in "fikir diin naceyb ah" uu ku jiro xukuumadda isbahaysiga ah ee hadda dalka Talyaaniga maamusha, wuxuuna intaas ku daray in "sidaasoo ay tahay markii ay gabadha argagixisada cusub ah dalka dib ugu soo laabatayna..."
Hadalkiisa ayaa u muuqday mid uu ku durayay go'aanka ay Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ku salaameen Silvia Romano, islamarkii ay garoonka diyaaradaha kasoo dagtay.
Caa'isha Romano oo waxay aheyd samafale ka howgeli jirtay xarun lagu daryeelo carruurta agoonta ah oo ku taalla koonfurta bari ee Kenya.
Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte iyo wasiirkiisa Arrimaha Dibadda ayaa garoonka diyaaradaha uga hor tagay markii ay Silvia kasoo dageysay magaalada Rome ee caasimadda dalkaas.
Wararka la xiriira Silvia (Caa'isha) ayaa isasoo tarayay isbuucyadii lasoo dhaafay, bulshada Talyaaniga ayaana u muuqda inay ku kala qeybsan yihiin xaaladdeeda, xilli qaarkood ay dhaliilayaan kuwo kalena difaacayaan.
Goobta lagu bixiyey lacagta lagu sii daayey Silvia Romano oo la shaaciyey
Soomaliya 16.05.2020. 14:30
Haweenayda 24-sano jirta ah ayaa ku dhowaad 18 bilood lagu haystay gudaha Soomaaliya.
Talyaaniga oo beeniyey war uu Turkiga ka faafiyey Silvia Romano
Soomaliya 13.05.2020. 07:20
Al-Shabaab oo xaqiijisay in ay madax-furasho kusii deysay Silvia Romano
Soomaliya 12.05.2020. 14:00
Kaalinta ay Qadar ku lahayd "sii deynta" Silvia Romano oo la shaaciyey
Soomaliya 12.05.2020. 12:00